Saturday, 8 Jun, 2019 10:12 AM
फेरि पनि नेकपाका सचिवालय नेता वामदेव गौतमलाई उराल्ने र ओराल्ने खेल शुरु भएको छ । उनलाई अहिले बैतडीबाट उपचुनाव गराएर संसदमा प्रवेश गराउने भन्दै केपी, प्रचण्डसहित त्यहाँका सांसद दामोदर भण्डारीलाई राखेर छलफल भयो । तर, दामोदरले ‘बरु, पार्टी छाड्छु, संसद छाड्दिनँ’ भनेका छन् ।
उनी केही समय अर्थराज्यमन्त्री पनि भएका थिए । बैतडी भनेको नेकपाले भवितव्यमा जित्ने ठाउँ हो । त्यहाँ नेकपाको संगठन र सुरक्षित ठाउँको अभाव छ । दामोदरलाई बोकेर हिँड्ने मान्छेचाहिँ बिचौलिया\_बद्नाम व्यापारी दीपक भट्ट रहेछन् । उनले कांग्रेसका अक्टोपस सांसद भनेर चिनिने अमरेशकुमार सिंहलाई दिएको सूचनाअनुसार यसबीच दामोदरलाई कहिले प्रचण्डकहाँ त कहिले ओलीकहाँ भेट्न पठाइयो ।
अचम्मचाहिँ के छ भने, यसअघि काठमाडौं– ७ मा वामदेवका लागि छाडिदिन्छु भन्ने रामवीर मानन्धर केपीका पक्का मान्छे, अहिले कुरा आएको बैतडीका दमोदर पनि उनकै एक्का । बुझ्नुपर्नेले किन कुरा बुझ्दैनन् र कहिले डोल्पा, कहिले प्युठान र कता भन्दै हिँडेका छन् ? एकातिर संसद छिर्न लोभ गरेको देखिने, अर्कातिर केपी ओलीलाई झस्काउन आउँदैछ कि भन्ने पर्ने , त्यसमा पनि छिनको छिन बूढीगण्डकी, त्रिशूलीजस्ता जलविद्युत परियोजना क्याबिनेट निर्णयबाट फुत्काउन सक्ने, लोकमानसिंहलाई राष्ट्रिय सहमति जुटाएर अख्तियार प्रमुख बनाउन सक्ने बिचौलिया कसरी सक्रिय भइरहेका छन् ? कुरा जटिल छ ।
यसबीच, पार्टीभित्रैका बिचौलियाले कहिले माधव नेपाललाई गएर प्रचण्ड र केपी मिलिसके, बाहिर जे भए पनि भित्रभित्र बसेर कुरा टुंग्याइसके भनेर उराल्ने, कहिले १० देखि ३० मीनेटभित्र केपी र माधव मिल्छन्, तपाईंलाई अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, केही पनि दिन्नन् भनेर उचाल्ने काम भइरहेको छ । यो कुरा माधव, प्रचण्ड र वामदेव बसेको ठाउँमा उठेको हो ।